Izindaba - Uyini umehluko phakathi kwemikhumbi yokudoba enezinkomishi eziyi-3000 nobubanzi benkomishi 4000?
Uyini umehluko phakathi kwemikhumbi yokudoba enobubanzi benkomishi 3000 nobubanzi benkomishi 4000?
Kunokwehluka okuthathu phakathi kwezikebhe zokudoba i-3000 kanye ne-4000. Ubude bolayini bokudoba buhlukile enkomishini, ijubane lokwamukela lihlukile, futhi isisindo sesikebhe sokudoba sihlukile;
Lapho usebenzisa izikebhe zokudoba olwandle, izindinganiso zezikebhe zokudoba zivame ukumakwa ngamagama anjenge-xxx-3000 ne-xxx-4000. Ngemuva kwalokho i-3000 ne-4000 lapha isho amapharamitha wobubanzi bendebe. Yini ubukhulu bendebe? Lapho inkomishi ejikayo ijikeleza, ububanzi obungaphandle bomzimba wenkomishi bubizwa ngokuthi ubukhulu bendebe; Uma imodeli yesikebhe sokudoba imakwe ngama-3000, kusho ukuthi ububanzi obungaphandle benkomishi yesikebhe sokudoba bungu-3cm. Uma imodeli imakwe ngama-4000, ububanzi obungaphandle benkomishi yesikebhe sokudoba ngu-4cm; Ngokufanisa, uma imodeli yomkhumbi wokudoba ingu-5000/6000, kusho lokhu;
Ngaphezu kokunikeza abadobi umuzwa wobubanzi benkomishi, izinhlobo ezimbili zamapharamitha amakiwe zingabasiza ukuba baqonde kangcono ubukhulu bendebe. Izikebhe zokudoba ezinobubanzi obuhlukile benkomishi zingavunguza ubude obuhlukile bezintambo zokudoba. Lapho kuhambelana, umbuso wamanzi ofakiwe awufani. Noma ubude benduku yokuphonsa buhlukile, ukukhethwa akufani; Kunokwehluka okubili okuyinhloko phakathi kwemikhumbi yokudoba engama-3000 nengama-4000
Umehluko owodwa, inombolo efanayo yomugqa, isikebhe sokudoba esingu-4000 kunesikebhe sokudoba esingu-3000, ubude bolayini obuzungezayo bude
Ububanzi bezinkomishi ezahlukahlukene zemikhumbi yokudoba buholela kubude obuhlukile bezintambo zokudoba ezisontekile. Emikhumbi eminingi yokudoba, kuzoba nochungechunge lwezinombolo enkomishini, njenge-xxx-3000-0.32 / 150. Kulolu chungechunge lwezinombolo, i-XXX iwumkhiqizo womkhumbi wokudoba, u-3000 ubhekise kububanzi benkomishi, u-0.32 ububanzi bomugqa ofanayo obutuswayo bomkhumbi wokudoba, kanti u-150 ubude obude kunabo bonke bomkhumbi wokudoba osontwe ngezintambo zokudoba, ukuthi ngamamitha ayi-150.
Njengesethenjwa, u-0,32 ububanzi bocingo lomugqa 4. Uma kusetshenziswa inombolo yocingo engezansi komugqa wesi-4, ubude bokuthile ngokusobala bukhulu kunamamitha ayi-150;
Ngokweqiniso, ngoba abakhiqizi bolayini bokudoba abahlukahlukene abakwazi ukuhlanganisa ubukhulu benombolo yolayini, futhi abakhiqizi bezikebhe zokudoba abahlukahlukene bangahlanganisa ubukhulu bendebe, kepha ukujula kwenkomishi akukwazi ukuvumelana. Ngakho-ke, izinhlobo ezahlukahlukene, noma ngabe ubukhulu benkomishi buhambisana, kumele babe namaphutha kubude bolayini wokudoba ojikayo. Uma besebenzisa izinhlobo ezahlukene zomugqa wokudoba, iphutha liyoba likhulu kakhulu;
Ukufingqa: ubukhulu benkomishi yomugqa wesikebhe sokudoba, iba bude ubude bomugqa ongalimala ngobubanzi obufanayo nenombolo yomugqa. Izikebhe zokudoba ezingama-3000 nezingama-4000 zisebenzisa inombolo efanayo yomugqa, kanti izikebhe zokudoba ezingama-4000 zikwazi ukugoqa imigqa emide;
Umehluko 2: 4000 izikebhe zokudoba zithatha ngokushesha kunezikebhe zokudoba ezingama-3000
Ububanzi benkomishi ipharamitha yobubanzi obungaphandle besikebhe sokudoba. Ngamanye amagama, ubude bendilinga yomugqa wokudoba ezungeze inkomishi ejikayo. Bese isikebhe sokudoba naso siphenduka isiyingi. Izikebhe zokudoba ezingama-3000 zibuyisela emuva umugqa wokudoba ongu-3cm kuthi izikebhe zokudoba ezingama-4000 zibuyise umugqa wokudoba ongu-4cm; Ngenxa yalokhu, izikebhe zokudoba ezingama-4000 zingathatha ngokushesha okukhulu kunezikebhe zokudoba ezingama-3000;
Lokhu kubaluleke kakhulu lapho ukhetha izikebhe zokudoba. Isibonelo, sisebenzisa izikebhe zokudoba ezingama-2000 kaningi kunezikebhe zokudoba ezingama-3000. Asazi yini ukuthi izikebhe zokudoba ezingama-3000 zithatha ngokushesha ukwedlula izikebhe zokudoba ezingama-2000? Kungenxa yokuthi izikebhe ezingama-3000 zokudoba zithatha kancane futhi zidinga ukubhuleka okuphezulu; Ngale ndlela, ngejubane eliphezulu nokuhamba kancane, ukulahleka kwamabhuleki esondo lokudoba kungancishiswa, futhi ukusebenza kahle kokulawulwa kwezinhlanzi kungathuthukiswa ngempumelelo;
Umehluko ukuthi isikebhe sokudoba esingu-4000 sisinda kancane futhi sikhulu kunesikebhe sokudoba esingu-3000
Lapho ububanzi bomkhumbi wokudoba bukhula, ukujula kwenkomishi yomugqa kuzoba kukhudlwana. Lapho inani lamazembe lilingana, umthamo womkhumbi wokudoba ongu-4000 uzokuba mkhulu kancane kunowomkhumbi wokudoba ongu-3000, futhi isisindo sizoba sikhulu ngokwemvelo;
Ngale ndlela, ngoba ukuphakama, ukuma komzimba nobude bengalo bomdobi kuhlukile, kungasetshenziswa ngezigxobo ezinde ezahlukahlukene; Isizathu salokhu ukuthi alikho izinga lezinhlobo ezahlukahlukene zemikhumbi yokudoba nobude obuhlukile bezinduku zokudoba;
Ukwehluka okuthathu okungenhla phakathi komkhumbi wokudoba 3000 kanye nomkhumbi wokudoba 4000 kukhonjisiwe empini yangempela. Kungaqondakala ukuthi uma indawo yokudoba inkulu futhi inhlanzi ebhekiwe ingeyona encane, khona-ke umphumela wokusebenzisa umkhumbi wokudoba u-4000 ungcono. Ngemuva kwakho konke, ngenombolo efanayo yomugqa, umkhumbi wokudoba u-4000 ungavula eminye imigqa futhi udlale kude; Ngokuphambene nalokho, uma indawo yamanzi incane nezinhlanzi ezibhekiswe kuzo zincane, izikebhe zokudoba ezingama-3000 zizokwanela.
Isikhathi Iposi: Jul-09-2021